Uhlahlo lwabiwo-mali lweprojekthi yoyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uhlahlo lwabiwo-mali lweprojekthi yoyilo
Ukuba usebenza ngokuzimeleyo okanye bayakubuza bhajethi yenkonzo entsha kwaye awazi ukuba ungaqala ngaphi, kule posi sikunceda wenze uhlahlo-lwabiwo mali oluhambelana neprojekthi nganye.
Kwiiprojekthi zoyilo kunzima uxabise ngokwezoqoqosho umsebenzi wethu. Singahlula umsebenzi wethu kwiindidi ezahlukeneyo, kwaye ngale ndlela, ukubala ixabiso.
Indlela elungileyo yokuxabisa umsebenzi wethu yile isigqibo ixabiso lethu ngeyureOko kukuthi, sibiza malini ngeyure esiyenzileyo. Oku kusivumela ukuba sisebenzise ixabiso kwinkonzo nganye sibala ixesha esilityale kuyo. Umzekelo, ukuba sihlawulisa i-euro ezilishumi ngeyure kwaye basicela ikhadi lokunxibelelana, becinga ukuba ngeeyure ezisibhozo singaziyila, ixabiso lethu liya kuba ngama-euro angama-80.
1 Uxwebhu locwangciso lwangaphakathi
2 Uxwebhu lwangaphandle
Uxwebhu locwangciso lwangaphakathi
Ukucwangcisa ngokufanelekileyo siya kuqhuba uxwebhu lwangaphakathiOko kukuthi, ayizukubonakala kumthengi. Iya kusinceda sizilungelelanise kwaye kamva siya kwenza uxwebhu lomthengi olushwankathela onke amanqaku.
Kolu xwebhu lwangaphakathi sinokuwaphula la manqaku alandelayo:
Inkcazo yeprojekthi kunye nomthengi: Kweli candelo kufuneka sibhale yonke idatha enomdla, njengenkcazo, imihla yokuhanjiswa, ulwimi / iilwimi esiza kuzisebenzisa, njl.
Inkcazo yemisebenzi, imisebenzi kunye neeyure zokuzinikezela: Imiba ekuza kuxoxwa ngayo kweli candelo ingaba ziintlanganiso, uphando kunye nokufundwa komxholo. Ukuphuhliswa komxholo (i-moodboard, i-brainstorming), ulawulo (ukunxibelelana nomthengi, ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali). Siza kongeza amanqaku ngakumbi kuxhomekeke kwimfuno yeprojekthi nganye.
Inkcazo yeendleko ezongezelelweyo: Xa siqhuba iprojekthi yoyilo kufuneka sithathele ingqalelo iindleko ezinokuthi zivele kuphuhliso lwayo, ezinje ngotshintsho kubathengi, ukuhamba kwimeko yokuba intlanganiso ingaphandle kwendawo yethu, njl.
Inkcazo yemicimbi yokunika ingqaleloNgaphezulu kwayo yonke loo nto, ukuba sisebenza nabantu besithathu, kwaye ke, kuya kufuneka silungelelane.
Isatifiketi seGantt: sisixhobo esibonakalayo sokucwangcisa imisebenzi kunye nexesha elicwangcisiweyo esiza kulinikela kulowo nalowo kubo. Ukuqonda lo mbono, singacinga ngekhalenda apho siphawula khona imihla ngemibala eyahlukeneyo ngokomsebenzi ekufuneka wenziwe.
Isithembiso soqoqosho esiza kusibonisa umthengi siya kushwankathela onke amanqaku angaphambili. Akufunekanga sibonise bonke, sicebisa ukuba amaqela ngokwamaqela.
Kuhlahlo-lwabiwo mali sinokongeza la manqaku alandelayo:
Ukwahluka okwahlukileyo izixhobo zoyilo.
Uhlahlo lwabiwo mali lwe umbono.
Uhlahlo lwabiwo mali lwe izinto ezongezelelweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uhlahlo lwabiwo-mali lweprojekthi yoyilo
UEdgar barrios sitsho
Molo mhlobo, ndingalufumana phi olu xwebhu?
Phendula uEdgar Barrios
Yenza imibala yemifanekiso ngexesha lokurekhoda
Hlanganisa izihloko kunye nokuthungwa kunye ne-Photoshop